Smile | Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
Dad badan oo muddo dheer ilkahoodu ay ahaayeen caddaan. Waxaa jira noocyo kala duwan oo falalka aad sameyn karto si loo hubiyo in ilkaha soo noqon maayo huruud. Waxaa jira siyaabo si ay mar kale u caddayn ilkaha cad. Maqaalkani waxa uu ka mid ah talooyin kala duwan ee aad qaadan ilkaha cad oo ay u sii cad.
Hubi in ilkaha waxaa la xidhhidha nadiifiyo ka hor inta la isticmaalayo caddeeyo guriga ee mudada ilkaha. Ilkaha caddeeyo waxyaabaha noqonayaan kuwo waxgal ah haddii aad u codsan on gabi ahaanba nadiif teeth.If ilkaha aan nadiif ah marka aad u caddayn hor cadayashada ka dibna natiijada noqon doonaa fujiyaan sinnayn.
Qof walba waa ogyahay in liinta, sida liinta ama liin, hodan ku yihiin vitamin C, laakiin ma ogtahay waxay ka dhigi kartaa in aad ilkaha caddaan? xataa Waxaad isticmaali kartaa diirka liin ah ama liin ah, aad leedahay in la sameeyo oo dhan waa xoq dusha sare ee ilkaha ka dhanka ah qayb ka mid ah dib u, oo wuxuu ka dhigaa inay aqrisanin. By gelinaya yar oo cusbo on diirka liin ah ama orange, natiijada laga hormarin karo.
Waxa ugu horeeya ee muhiim ah marka la isku dayayo in ilkaha sii cad yahay nadiifinta xirfadeed. Iska ilkaha nadiifiyo lixdii biloodba mar iyo mar walba jadwal ballantaada mustaqbalka marka aad nadaafadda hadda.
waxyaabaha ku jira kiimikada in jebiyo ilkaha. roughness burush ayaa waxa ay ka dhigeysaa hubiyo in ilkaha waa nadiifsan tihiin.
Haddii soda la cabbo, shaah, kafeega ama khamri madow, kabasho biyo ah iyo sidoo. Kuwani sharaabka madow wasakheeyey ilkaha, gaar ahaan haddii ay si joogto ah u wada baabba'aan. Swishing kabashooyin yaryar oo biyo ku wareegsan afka dhexdooda kabashooyin yaryar oo sharaabka, kuwaas oo kaa caawin kara baabi'iyo hadhay kasta oo keeni karta in xayd. Ka dib markii wax baabbi'iya sharaabka, kuwaas oo, xasuuso inaad ilkaha cadaydaan sida ugu dhaqsaha badan.
A hab yaqaan yar si aad u hesho ilkaha ay whitest waa in ay isticmaalaan miraha qaarkood. tusaalooyin lamaane A of miraha aad u fiican oo u caddayn karin ilkahoodu yihiin liinta iyo liin. Waxa kale oo aad u salaax yaabaa diirka liin ah ka gees ah dusha sare ee ilkaha in ay u caddayn.
Qaad caday Ghadafi in aad isticmaali karto ka dib markaad cunto sonkor. cuntada Kuwani eekaan ilkaha si fudud, oo uu bilaabo geedi socodka xayd ama ku darto in ay. Ka dib markii naftaada daaweynta si macaan, qaado daqiiqado yar in la cadaydo. Cajiinka ilkaha looma baahna haddii aad xoqin ilkaha iyo markaas iyaga si fiican u biyo raaci.
taajaj Your marnaba u caddayn doonaa sida inta kale ee ilkaha. taajaj Your isku sii joogi doonaa sida ilkaha heli caddaan. Tani waxay ka dhigi kara taajajka waxaa taagan xitaa ka badan ka hor.
Waxaad u baahan tahay si looga hortago in qofkuba huurada a maxaa yeelay waxa ay keeni kartaa ilkaha si uu u noqdo discolored.
Ka dhig caday iska guriguu dhigtay marka aad cuni nacnac ama macmacaan kale. Maxaa yeelay, cuntooyinkan dhegi ilkaha u yahay mid aad u fudud u, waxay kor u qaadi kartaa xayd. Ka dib markii ay ku riyaaqayaa macmacaanka ah, cadaydo, waayo laba ama saddex daqiiqo. Ma aha in aad u leedahay in lagu cadaydo, inta aad xoqin ilkaha si fiican iyo si deeqsinimo raaci biyo.
saliidda qumbaha Organic waxaa loo isticmaali karaa sida wakiilka ah la caddeeyo weyn ee aad teeth.If waxaad isticmaali saliid qumbaha sida dawo luqluqasho, waxay u caddayn karin ilkaha ee ku saabsan 10 daqiiqo ah maalin kasta. Ka dib markii ku saabsan 10 daqiiqo, afkaaga baxay iyo burush raaci sida aad sida caadiga ah ay doonaynin. Waad arki kartaa natiijooyinka qaar ka mid ah in ka yar dhawr maalmood.
Caday ilkaha ka dib kasta oo hadhuudh caawin doonaa si ay u sii xor ka discoloring. Tani waa muhiim marka aad la cabbo qaxwaha.
saliidda qumbaha An organic waxaa laga yaabaa in kaliya tigidh si ay u caddeeyo ilkaha. Siinta ilkaha lagu luqluqdo maalin kasta 10 daqiiqo ah ee saliidda qumbaha yeelan karaan saamayn weyn ku isakaga ee dhoolla. Ka dib markii ay 10 daqiiqo ayaa maray, mayr afkaaga iyo ilkahaaga nadiifi sida caadiga ah. Waa in aad aragto natiijooyinka qaar ka mid ah dhowr maalmood ka dib.
Takhtarkaaga ilkuhu wuxuu aad oo guriga ilkaha fiican sheegi karaa iyada oo aan waxyeelo u dhaldhalaalka ama ciridka.
si joogto ah u caday ilkaha haddii aad qabto dhoola weyn. Cuntada iyo waxyaabaha kale ee ay dhisi karaan ilkaha oo ku wada wasakheeyey. Waxaad haysan doontaa in aad isku dhibin oo ku saabsan midab ilkaha haddii aad si joogto ah u cadaydo ilkahaaga.
Biyaha waa aalad muhiim ah in dagaalka ka dhanka ah Wasaqda. Waxa aad ka caawisaa in ay labada raaci off ilkaha iyo sidoo kale looga hortago xayd. Waa dhaqanka wanaagsan caafimaadka si aad isticmaalka biyaha kor maalin kasta, gaar ahaan ka dib cunto kasta.
Si loo dhowro isakaga ee ilkaha, socday dhakhtarka ilkaha si joogto ah ilaa jeeg nadiif ah oo waa waajib. In si joogto ah waa hab fiican si ay ilkaha sii cad. Waa in aad soo booqato dhakhtarka ilkaha bilood ugu yaraan lix.
Isticmaalka daawada ilkaha la caddeeyo waa habka ugu fudud si aad u hesho Xiddig lfi lagana kuwa ilkaha cad in aad la raadinaya. Iyada oo khilaaf, cadayga this ge- Wasaqda iyo huurada. Muddo, waxaad yeelan doontaa ilkaha ifaya sida Wasaqda bilaabaan inay baaba'aan.
Hydrogen haydarojiin waa in aan daaweynta ammaan ah caddeeyo ilkaha. Waa halis iyo waxay keeni kartaa ilkaha discolored; Waxa kale oo laga yaabaa inaad la laba ilkaha kala duwan midab. Iska ilaali inaad wax soo saarka kasta oo in uu leeyahay hydrogenperoxid.
Dhaldhalaalka waa lakabka ah ee macdanta on lakabka ilaaliya ee macdanta in caawinaysaa ka hortagga cudurada xidid iyo sidoo kale waxyaabo kale oo waxyeelayn kara ilkaha. Qaar ka mid ah waxyaabaha ilkaha caddeeyo si xun u saamayn kartaa isakaga ee ilkaha.
Haddii aad cadaydo oo ilkaha dhexdooda jeer maalintii, laga yaabaa inaad qabto doonaa ilkaha caddaan marka la barbar dhigo kuwa aadan sidaas samayn inta badan. Isticmaalka hababka kuwaas oo ka saari doonaa qofkuba of huurada oo discolors ilkaha. Waa fikrad fiican in la cadaydo ilkahaaga iyo sidoo kale nadiifin cunto kasta ka dib.
Waxaad si loo yareeyo aad kafeega si aad u hesho a smile.As caddaan adag doono maadaama ay tani laga yaabaa in dad badan, bunka waa sababta keentay jirriqsi discolored iyo wasakheeyey. Isku day in aad cabto shukulaatada kulul halkii kafeega.
liinta ee liin iyo juice lime u caddayn karin ilkaha wax ku ool ah waa jir ah naagood Sheeko. Waa fikrad wanaagsan in gebi ahaanba iska sii joogo ka habkaan daaweynta.
Waa in aad ogaato in xal kasta oo la caddeeyo oo kaliya ka shaqeeya on ilkaha dabiiciga ah. Kasta oo meelaha aan dabiici ahayn, oo ay ku jiraan taaj, lagala kulmo, implants iyo sida aan la beddeli doonaa midab. Isticmaalka whiteners ilkaha uu keeni karo shaqada ilkaha, sida taaj, in ay u istaagaan ka soo horjeeda ilkaha cad aad dabiiciga ah.
Waxaad heli doontaa ilkaha caafimaad iyo caddaan on joogtada ah nadiifinta aasaasiga ah si joogto ah la cadayga iyo findhicilashada. Alaabooyinka ay ku jirto baking soda waa wax ku ool ah ay ka saareen Wasaqda sida aad xadhigga iyo findhicilashada.
liinta yeelan karaan oo aad u badan acid aad teeth.You Sidoo kale waa in ay ka fogaadaan casiirka liinta iyo weliba. acids ku qoran waa kuwa laga cabsado ilkaha. Waxa kale oo aad rabto in aad ka fogaato wax cunaya cuntooyinkan ka hor inta aadan la jiifsatay habeenkii, maxaa yeelay, iyagu waxay idinka dhigayaan u badan tahay in dhibaato ay ka soo reflux acid, kaas oo sidoo kale waxay dhaawici kartaa ilkaha.
Haddii aad xiisaynayso in la caddeeyo ilkaha, la hadal dhakhtarkaaga ilkaha ugu horeeya. Caddeeyo aad ilkaha ma aha ballanqaad la isku qurxiyo fudud. Orod oo waxaad tagtaa dhakhtarka ilkaha si joogto ah si loo hubiyo in ilkaha caafimaad. Hubi inaad la hadasho dhakhtarkaaga ilkaha oo ku saabsan mudada a ilko caddeeyo.
Samee budada ah by isla shiidi qolofka orange iyo caleemaha. Budada Tan waxaa lagu saleyn karaa in aad caday iyo dareen.
Ha u caddayn ilkaha haddii aad qabto arrimaha ilkaha la xalin sida cavities.Make hubi inaad la tashato dhakhtarkaaga ilkaha ka hor laga bilaabo guriga wax nidaamka caddeeyo haboon idiin yihiin.
Ha isku hallaynina cadeyga in sheegan waxay ku siin doonaa ilkaha caddaan. Qaar badan oo kaliya wax yar ka caddeeya aanu u caddayn ilkaha, haddii at dhan, laakiin waxaad isticmaali kartaa waxyaabaha kale haddii aad rabto in aad ilkaha cad. Haddii aad soo iibsato daawada cadayga ah caddeeyo, mid ka mid ah ay ku jiraan baking soda iibsadaan, sida ay dhab kaa caawin kara.
Sida ku xusan ka hor, waxaa jira dad badan oo kala duwan oo doonaya in ay leeyihiin ilkaha cad. xeelado badan oo kala duwan loo isticmaali karo caddeeyo ilkaha iyo baabi'inta Wasaqda huruud. Ilkahaaguna noqon kartaa cad sida ay suurto gal ah haddii aad si fudud u isticmaalaan macluumaadka halkan ku soo bandhigay.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - June 5, 2016 4:15 AM
Categories: Home ku saleysan in Ilkaha caddeeya aanu u caddayn Tags: Smile White Bright, Isku kalsoon In Your Smile, Smile, ilkaha cad